Mbola miverina ihany koa aho, miasa miaraka amina orinasa iray izay mandao masoivoho iray ary miara-miasa amiko manatsara ny fisian'izy ireo YouTube… Ary, indray, ny masoivoho niarahan'izy ireo niasa dia manana ny kaontiny rehetra. Efa nitaraina momba ireo masoivoho izay manao an'io nandritra ny folo taona mahery aho izao ary nanoro hevitra ireo orinasa mba tsy hanao izany mihitsy. Ary tsy tokony hisy raharaham-barotra hanome fidirana sy fidirana amin'ny teny miafina hitantanana kaonty rehetra.
Ny fomba mety indrindra anaovana ny asan'ny masoivoho rehetra dia ny fampiasana ireo endri-javatra asehon'ireo sehatra lehibe rehetra, manomboka amin'ny fisoratana anarana, mpampiantrano, hatrany amin'ny fantsona sosialy hanomezana ny maso ivoho fidirana mpitantana fa tsy miditra mihitsy ny faktiora sy ny fahazoana tompony. Raha tsy manao izany ianao, dia misy foana ny vintana fa tsy maintsy miala ilay masoivoho ary sarotra aminao ny miverina tompony na miditra amin'ny masoivohonao manaraka. Na ny ratsy kokoa aza, ny masoivoho na mpanolotsaina miara-miasa aminao dia mety hiala amin'ny asa aman-draharaha na tsy ho afaka rehefa mila izany ianao. Aza atahorana ny orinasanao toy izao!